Abavelisi beemveliso kunye nabaxhasi | Imveliso yase China
Isixhobo esiBini seNtloko yokuDana kweNja
1.Isixhobo esiphambili senja yokulahla inja ngamazinyo afanayo ukususa ngokukhawuleza iinwele zangaphantsi zangaphantsi ezifileyo okanye ezikhululekileyo, amaqhina kunye neetangule kwiziphumo zokuzilungisa ezingcono.
2.Isixhobo esiphambili senja yokulahla inja ayisusi kuphela ibhatyi efileyo, kodwa ikwabonelela ngolusu kulusu ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi lolusu.Amazinyo enzelwe ukungena nzulu kwingubo ngaphandle kokukrwela ulusu lwezilwanyana zasekhaya.
3.Isixhobo esiphambili sokulahlwa kwenja entloko yi-ergonomic ngesiphatho esithambileyo esichasayo. Akusekho sandla okanye isihlwitha okoko nje xa ubrasha isilwanyana sakho.
Ifayile ye-Pet Nail ikhuselekile kwaye ifezekisa ngokulula isikhonkwane esigqityiweyo kunye nomda weDayimani. Amakristali amancinci afakwe kwi-nickel ngokukhawuleza iifayile zeenzipho zezilwanyana. Ibhedi yefayile yesikhonkwane ifakiwe ukuze ilingane isikhonkwane.
Ifayile yesikhonkwane sefama inesiphatho esihle kunye nokubambelela okungatyibiliki.
Inqanaba lokurhoxisa inja enkulu
1. Hlamba ngobunono iinwele kwicala lokukhula kweenwele. Amagqabantshintshi asusa iinwele ezikhululekileyo, asuse iitang, amaqhina, idander kunye nomhlaba obanjiweyo.
2. Izikhonkwane ezinokurhoxiswa zikongela ixesha elibalulekileyo lokucoca. Xa iphedi igcwele, ungazikhulula iinwele ngokutyhala iqhosha ngasemva kwephedi.
3. Ibrashi enkulu ebuyiselwayo enokubanjiswa ngesiphatho esintofontofo, cofa nje iqhosha elingaphezulu kwebrashi ukuze ukhulule ngokulula iinwele.lizakunceda ngokuqinisekileyo ukuba uzonwabise kwaye wonwabe xa uzilungisa.
Utshintsho oluDibeneyo lweNja yeOxford
Inja yokubopha ye-oxford ehlengahlengisiweyo izaliswe sisiponji esitofotofo, ayisiyoxinzelelo lwentamo yenja, uyilo olugqibeleleyo lwenja yakho.
Inja yokubopha ye-oxford ehlengahlengiswayo yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezinokuphefumla. Igcina isilwanyana sakho sothando sihle kwaye sipholile ngelixa sigcina kulawulo olupheleleyo.
Isiphatho esongezelelweyo ngaphezulu kwesi sixhobo senza kube lula ukulawula nokuhamba utsala nzima kunye neenja ezindala.
Le ntambo yokubopha inja ye-oxford ineesayizi ezi-5, ezifanelekileyo izinja ezincinci eziphakathi nezikhulu.
Ikati yokususa iinwele
1.Lebrashi yokususa iinwele ikati isusa iinwele ezifileyo kwaye zichithe iinwele zezilwanyana ezifuywayo zigcina isilwanyana sakho sizilungise kakuhle.
2.Ibrashi yekati yokususa iinwele yenziwe ngerabha ethambileyo enoyilo oluncinci, kusetyenziswa umgaqo we-electrostatic ukufunxa iinwele.
3.Ingasetyenziselwa ukuphulula izilwanyana zasekhaya kunye nezilwanyana zasekhaya eziza kuqala ukhululeke phantsi kwentshukumo yekati yokususa iinwele.
4.Ibrashi ilungele bonke ubungakanani bezinja kunye neekati. Kukubonelela ngesilwanyana esilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, gcina igumbi lakho licocekile kwaye izilwanyana zasekhaya ziphilile.
Inja yokuhlamba Massage Brush
Inja yokuhlamba umzimba inezikhonkwane zerabha ezithambileyo, inokutsala ngoko nangoko kwaye ikhuphe uboya kwidyasi yakho xa isilwanyana sakho siphululwa okanye sihlanjwa. Isebenza kakuhle kwizinja kunye neekati ezinobungakanani bonke kunye neentlobo zeenwele!
Iingcebiso zokubambelela ngerabha kwicala lokuhlanjwa kwenja ekubonelela ngolawulo olukhulu nokuba ibrashi imanzi.ibrashi inokunceda ekupheliseni iitangar kunye nemisipha yesikhumba esifileyo, isenza idyasi icoceke kwaye isempilweni.
Emva kokuxubha isilwanyana sakho sasekhaya, yitshise ngokulula le nja yokuhlamba ibrashi yokuthambisa ngamanzi. Ke ilungele ukusetyenziswa kwexesha elizayo.